October 2021 - SonSon LinLin
October 7, 2021 sonsonlinlin 0
အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းကို ဒါတွေပြင်ဆင်ထားပါအဓိကကတော့ဖုန်းစစ်တာပါ
ဒီနေ့ညီမတို့ကားသုံးခါတိတိအစစ်ခံရပါတယ် မြေနီကုန်းမှာတစ်ခါ မရမ်းကုန်း Mercedes Showroom နားမှာတစ်ခါ ၈မိုင်ကုန်းကျော်တံတားဆင်းဆင်းချင်းနားမှာတစ်ခါပါ စစ်တဲ့ထဲမှာတော့မြေနီကုန်းမှာစစ်တာကအင်အားအများဆုံးပါ မြေနီကုန်းမှာစစ်တော့ညီမတို့ကားရဲ့အရှေ့ကကားမှာ ကားပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့သံတုတ်တွေသံချိုက်တွေပါတော့ အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်Platform ပေါ်ပစ်တင်ပြီး “ဘာလို့အဲ့ပစ္စည်းတွေယူလာလဲ” လို့မေးပါတယ် ကားမောင်းသမားရောပါလာတဲ့သူတွေကိုပါ ကားပေါ်ကဆင်းခိုင်းပါတယ် သူတို့ကိုပေးမသွားသေးဘဲ ညီမတို့ကားကိုထပ်စစ်ပါတယ် နောက်ဖုံးတွေအကုန်ဖွင့်ပေးရပါတယ် ရှိသမျှချောင်ကြိုချောင်ကြားမကျန်အသေးစိတ်စစ်ပါတယ် အဓိကကတော့ဖုန်းပါစစ်တာပါ ‼️ညီမတို့ကားမှာဘာသံတုတ်မှလည်းမပါဘူး ဖုန်းတွေစစ်တာကလည်းအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးသွားပါတယ် ညီမတို့အရှေ့ကကားကတော့ ညီမတို့သွားတာတောင်ပေးမသွားပါဘူး ဖုန်းစစ်တာကတော့ Gallery ရယ် Facebook ရယ်ကိုအဓိကထားပြီးစစ်ပါတယ် (အဲ့တော့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ Twitter အတွက်ပုံsaveထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေsaveထားရင် Hideထားပါ […]
အသစ်စက်စက် လက်ထပ်ထားတဲ့ လင်မယား နှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့ထားတဲ့ တထပ်တိုက်လေးထဲက လက်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ..
အသစ်စက်စက် လက်ထပ်ထားတဲ့ လင်မယား နှစ်ယောက်ဟာ နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့ထားတဲ့ တထပ်တိုက်လေးထဲက လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေ ကြတယ် ။ နှစ်ဖက်မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းတွေဟာ အရမ်း ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ဖြစ်ကြလို့ လက်ဖွဲ့တွေကလည်း အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ များပါတယ် ။ နောက်ဆုံး လက်ဖွဲ့ အထုတ်ကို ဖေါက်လိုက်တဲ့အခါ အထုတ်ထဲမှာ စာအိတ်ဖြူ တခုကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ စာအိတ်ကို […]
ခ်စ္ ရင္ကိုက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလး ေတြအတြက္
ချစ် ရင်ကိုက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေး တွေအတွက် တချို့ မိန်းကလေးတွေမှာ ချစ်ရင် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်တခုရှိတယ် ။အဲဒါက ကိုက်တာ အားတိုင်းယားတိုင်း ကိုက်တာသူတို့ပြောတာက ချစ်လို့ကိုက်တာပါတဲ့မညှာမတာကို ကိုက်တာသူတို့ပြောရင်တော့ ဖွဖွလေးကိုက်တာပေါ့ကျုပ် အဲ့လိုမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ ကြုံဖူးတယ် လူလစ်ပီဆို ကိုက်ပီရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာလဲ ကိုက်တယ် ခ်စ္ ရင္ကိုက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလး ေတြအတြက္ ပန်း ခြံထဲ ချိန်းတွေ့ရင်လဲ ကိုက်တယ် အလကားနေရင်းကို သွားယားနေတာပီး လက်မောင်းတွေချည်း ရွေးကိုက်တာ နဲနဲ အနာ […]
မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ (အိုး) တင္၊ရင္ ေတြၾကည့္ၿပီး အပ်ိဳစစ္လား? မစစ္လား? ေဝဖန္ေနၾကတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ လူေတြဖတ္ဖို႔
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင်၊ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေဖတ်ဖို့ ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက […]
ေဘးဘက္ကအဆီပိုေတြ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားေစမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၅ ခု
ဘေးဘက်မှာ အဆီပိုတွေထွက်နေရင် အဝတ်အစားအကျပ်တွေဝတ်တဲ့အခါ အဆီရှိနေတာ သိသာစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂျိုင်းအောက်ဘက်၊ ခါးဘေးနဲ့ ဝမ်းဗိုက်နေရာတွေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘေးဘက်ကအဆီပိုတွေ သိသိသာသာလျော့ကျသွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ၅ ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ယောဂဖျာပေါ်လှဲပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခြေထောက်နဲ့လက်ကို ဆန့်ထုတ်ပြီး မြှောက်ထားပေးရပါမယ်။ မြှောက်ပြီးရင် ပြန်ချပါ။ ပြီးရင် ပြန်မြှောက်ပါ။ အဲ့အတိုင်း အကြိမ် ၂၀ လုပ်ရပါမယ်။ ပြည့်သွားရင် နောက်ထပ် ၂ ကျော့ ထပ်လုပ်ပေးပါ။ စုစုပေါင်း […]
ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်ရှိတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အကောင်းဆုံး မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (၅) နည်း
ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်ရှိတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အကောင်းဆုံး မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (၅) နည်း ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်တွေရှိလို့ ဘာသုံးသုံး မတည့်တာ၊ ပိုဆိုးသွားတာ မျိုးတွေ ဖြစ်နေပါ သလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ပျိုမေတို့ရဲ့ မျက်နှာကို ဓာတုပစ္စည်းတွေ မပါပဲ အားဖြည့်ပေးဖို့ လိုနေပါပြီ။ ခုဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်တွေအ တွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝပေါင်း တင်နည်းလေးတွေပဲဖြစ် ပါတယ် ။ (၁) သခြားသီး သခွားသီးနှစ်စိတ် […]
သင့္ေမြး ရက္ေတြက ေျပာျပေနမယ့္ သင့္ရဲ႕ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ အမူအရာေလးမ်ား…
တနင်္ဂနွေ -ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1 -ရုပ်တည်ကြီးနေတတ်ပေမယ့်..တကယ်ခင်သွားရင်လဲသူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲမှာမျက်နှာအပြောင်ဆုံးကသူပဲ -အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ်ရတာမလိုလိုတာမရတွေလေ. -အစွဲလန်းလဲကြီးတယ်ချစ်ပြီဆို တခြားလူနဲ့မတူသလိုမုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူး… – အချောကြီးမဟုတ်ပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်ညို့အားအပြင်းဆုံးက အသံ (အသံလေးကြားဖူးရုံနဲ့တင် စွဲလန်းသွားစေတာမျိုး) တနင်္လာ -အထာကျတဲ့ နေရာမှာ No. 1 -တခုခုဆို အရမ်းပြတ်သားတယ်ပြောစရာရှိရင် ဘယ့်သူ့ကိုမှာ အားမနာတတ်ဘူး -မှန်တဲ့ ဖက်က ရပ်တည်တာမျိုးပေါ့.. -ရန်လိုတဲ့လူ နဲနဲများတယ် ဒါမယ့်ဘသူ့ကိုမှသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး…ဘလိုအခြေနေပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိတယ် -အပေါင်းသင်းဆိုလဲ ရွေးပြီးပဲပေါင်းတယ် […]
အိမ်မှာပလပ်စတစ်ဘူးတွေခွက်တွေသုံးတတ်ရင်အောက်ဖက်ကိုလှန်ကြည့်ပြီးမှာသုံးပါ ပလပ်စတစ်အသုံးအဆောင်တွေကိုရေရှည်သုံးမယ်၊အကြိမ်ကြိမ်ထည့်မယ်၊သုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်ဖင်ကိုသာလှန်ကြည့်လိုက်ပါ။အောက်ခြေတနေရာမှာအထူးသဖြင့်ဖင်မှာတြိဂံလေးထဲမှာ1ကနေ 7အထိဂဏန်းတလုံးနဲစာ၂လုံး၊၃လုံးပါတာကိုတွေ့ရပါမယ်။အဓိပ္ပါယ်တွေကတော့ 1ဆိုရင်/(PET or PETE )သုံးတဲ့ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားပါ။သူကတခါပဲသုံးလို့ရပါတယ်။ထပ်ခါသုံးရင်အောက်စီဂျင်နဲ့ ပေါင်းမယ်။နေရောင်ခြည်အပူရှိန်နဲ့တွေ့ရင်အဆိပ်ပစ္စည်းတွေရေထဲကိုပျော်ဝင်စေပါတော့တယ်။ ရေသန့်ဘူးနဲ့အချိုရည်တော်တော်များးများကိုဒီလိုဗူးနဲ့ထည့်ပါတယ်။ပြန်လည်းအသုံးများပါတယ်။မသုံးစေချင်ပါ။အန္တရာယ်အရမ်းများပါတယ်။။3/7ဆိုရင် /(PVC or PC)အဆိပ်ဓာတုတွေထွက်ပြီးစားစရာရေတို့အတွင်းသို့ဝင်နိုင်လို့တခါပဲသုံးသင့်ပါတယ်။2/4ဆိုရင်/(HDPE or LDPE )POLYETHELENE နဲ့ လုပ်ထားလို့အကြိမ်ကြိမ်သုံးနိင်ပတယ်5ဆိုရင်( PP )POLYPROPYLENE နဲ့လုပ်ထာလို့ တစ်ကြိမ်မကသုံးနိုင်ပါတယ်။သိထားရင်အသုံးဝင်ပါတယ်။မသိရင်အန္တရာယ်အရမ်းရှိပါတယ်။အများသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးပါ။ လပ်စတစ်အသုံးအဆောင်တွေကိုရေရှည်သုံးမယ်၊အကြိမ်ကြိမ် ထည့်မယ်၊သုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်ဖင်ကိုသာလှန်ကြည့်လိုက်ပါ။အောက်ခြေတနေရာမှာအထူးသဖြင့်ဖင်မှာ တြိဂံလေးထဲမှာ 1 […]
သင့်အသားအရေကိုချက်ချင်းဖြူဝင်းသွားစေမယ့် ရှားစောင်းလက်ပပ်အသုံးပြုနည်း(၄)မျိုး အသားအရေကို ဖြူဝင်းပြီး ကြည်လင်နေတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို နည်းလမ်းမှန်မှန် သုံးပေးရင် သင့်အသားအရေကို အလျင်မြန်ဆုံး ဖြူဝင်းသွားစေနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ ။ဒီတော့ အသားအရေကို အချိန်တိုအတွင်း ဖြူဝင်းသွားစေမယ့် ရှားစောင်းလက်ပပ် ပေါင်းတင်နည်းလေးကို ချစ်တို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ်နဲ့ သကြား” – ရှားစောင်းလက်ပပ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း – […]